Maxay sababsatay Ikraan Tahliil Faarax? | KEYDMEDIA ONLINE
Maxay sababsatay Ikraan Tahliil Faarax?
Kaliya, Kooxda Fahad, waxa ay sheegeen in Maryan, xubno ka mid ah ehelkeeda ay ka mid yihiin Al-Shabaab, isla-markaana gabar caawiye u ahayd oo la yiraahdo Hodan ay u baxsatay dhanka Al-Shabaab, taas oo ilaa iyo hadda aysan u keenin wax caddeyn ah.
MUQDISHO, Soomaaliya – Sida ay ogaatay Keydmedia Online, Liibaan Daahir Cabdullaahi (Kadiye) oo ahaa agaasimahii Amniga dibbada ee Kooxda Fahad Yaasiin, ayaa hoggaankii hore ee NISA, u gudbiyay xog ku saabsan in Ikraan Tahliil, ay aruurineyso, warbixinada la xariira dilkii Guddoomiyihii hore ee Gobolka Banaadir, AUN Cabdiraxmaan Cumar Cismaan (Yariisow).
Koox uu ku jiro Kullane Jiis, ayuu la wadaagay in Ikraan, ay su’aalo la xariira dilka Eng: Yariisow, weydiisay saraakiishii wax ka ogaa, kuwaas oo si faafaahsan ula wadaagay xogaha qarixii ka dhacay xarunta Gobolka Banaadir, July 24, 2019, maadaama aysan wax shaki ah ka qabin in Ikraan ay baaritaan ku heyso kiiskaas.
Xogta arrinkaan la xariirta oo ay heshay KON, ayaa sheegaysa in qeyb ka mid ah saraakiishaas la dilay, qeybna ay dalka isaga carareen, kadib markii lagu furay baaritaanno, isla-markaana la daba-dhigay saraakiil kale oo ka war qaba dhaqdhaqaaqooda.
Bartamihii sanadkii hore, saraakiil ka tirsan Nabad-sugidda, ayaa si hoose ugu heshiiyay in ay baaritaan qarsoodi ah ku samyeeyaan dilkii Duqii Muqdisho, waxayna go’aansadeen in ay bannaanka keenaan xogaha qarsoon ee ku gadaaman kiiskaas, hayeeshee, saraakiishaas ayaa intooda badan la dilay, halka inta kalana ay ka carareen dalka.
Abkoow Cambuure oo ka tirsanaa booliska Soomaaliya, isla-markana mudo dheer lasoo shaqeynayey maamulka gobolka Banaadir, soona noqday Madaxii ilaalada Guddoomiyeyaashii Gobolka ee Yuusuf Madaale iyo AUN,Cabdiraxmaan Yariisow, ayaa ka mid ahaa saraakiisha ay Ikraan, wax ka weydiisay arrinka, hayeeshee, February 20, 2021, ciidamo ka tirsan NISA, ayaa dilay Abkoow, kadib makii ay rasaas ku fureen gaarigiisa oo marayay Taallada Daljirka Dahson.
Xilliyadaas, waxaa nolol iyo geeri lagu waayay Maxamed Nuur, oo ka mid ah Xogheynta Gaarka ah ee ENG Yariisow, halka bilo isku dhowdhow, siyaabo kala duwan meydkooda loo helay saraakiil kale oo aad ugu dhaweed Guddoomiyihii Gobolka.
Liibaan Daahir Cabdullaahi, oo ka mid ah shaqsiyaadka aadka ugu dhow, Fahad Yaasiin, ayaa la rumeysan yahay inuu dalka ka baxay dhamaadkii Juun, inkasta oo warar kale sheegayan inuu ka mid ah saraakiil hadda agaasimihii hore kula xayiran Istanbuul.
Sida ay xaqiijineyso xogtaan, Ikraan, waxaa loo beegsaday si looga hor tago xogta ay soo wadday, baaritaankeedu, wuxuu u suura-galiyay in ay ogaato xogo muhiim ah, waxaase la rumeysan yahay in ay horraanba natiijada baaritaankeeda la wadaagay saraakiil kale oo muhiim ah, kuwaas oo runta feydi doona xilli ay ahaataba.
25 bilood oo u dhiganta 113 Isbuuc ama 789 maalin, ayaa laga joogaa qarixi xarunta gobolka Banaadir, ee uu ku dhaawacmay AUN Cabdiraxmaan Cumar Cismaan (Yariisow), ka hor inta aan lagu sii dhameystirin dalka Qatar, mana jiro wax baaritaan rasmi ah oo Dowladdu ilaa hadda ku sameysay kiiskaas.
Kooda Farmaajo, oo Fahad horkacayo, waxa ay qaraxa ku eedeeyeen, Basiira Cabdi Maxamed, oo sidoo kale loo yaqaannay (Maryan ) isla-markaana ahayd haweenay araga naafo ka ah oo Injineer Yariisow shaqaaleysiiyey, tallaabadas oo muujineysa “masaakiin ayaa misko la fuulo leh’.
Fannaan ka mid ahaa hobollada Gobolka, kana soo jeeda Gobolka Gedo, ayaa lagu eedeeyay Al-Shabaabnimo, wuxuu sameeyay qiraal, hayeeshee, ma jirto ilaa hadda wax maxkamad rasmi ah oo la soo taagay. Ujeedka wuxuu ahaa in la sheego in qeyb ka mid ah shaqsiyaadka ku dhow Madaxda Dowladda ay yihiin Al-Shabaab, si kiiska loo marin habaabiyo.
Marka la eego tallaabooyinka uu Farmaajo qaadayay tan iyo 6-dii bishaan, isla-markaana la barbar dhigo xogaha kala duwan ee soo baxay, waa xaqiiq in Ikraan, ku jirto ama ku baxday gacan ay Farmaajo iyo Fahad wada ogaayeen, waxayna arritu ka soo billaabaneysaa, tan iyo markii 8 Febaraayo 2017, markaas oo ay talada dalka la wareegeen Al-Shabaabka Xasaanadda leh.